क्षतिको दाबी: तपाइँलाई के थाहा हुनु आवश्यक छ? | Law & More BV
ब्लग » क्षतिको दाबी: तपाइँलाई के थाहा हुनु आवश्यक छ?
त्यहाँ एक कमी छ र यो पनि अक्षम्य हो? त्यो अवस्थामा, परिणामस्वरूप भएको क्षति अन्य पक्षबाट प्रत्यक्ष रूपमा दावी गर्न सकिँदैन। सामान्यतया, पूर्वनिर्धारित नोटिस पहिलो पठाइएको हुनु पर्दछ अन्य पक्षलाई अझैसम्म र एक उचित अवधि भित्र आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने अवसर दिन को लागी। यदि अर्को पक्ष अझै पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल भयो भने, यसले पूर्वनिर्धारित हुनेछ र क्षतिपूर्ति पनि दावी गर्न सकिन्छ।
क्षति का प्रकार जुन क्षतिपूर्तिको लागि योग्य छन्
यदि संविदात्मक वा नागरिक दायित्व को आवश्यकताहरु पूरा भए, क्षतिपूर्ति दावी गर्न सकिन्छ। नेदरल्याण्ड्समा क्षतिपूर्तिको लागि योग्य क्षति पछि समावेश गर्दछ आर्थिक घाटा र अन्य घाटा। जहाँ डच नागरिक संहिताको धारा::6with अनुसार आर्थिक नोक्सानले नोक्सान वा नोफानको सामना गर्नुपरेको छ, जबकि डच नागरिक संहिताको अनुच्छेद:: १०१ अनुसार अन्य घाटाको चिन्ता छ। सिद्धान्तमा, सम्पत्ति क्षति जहिले पनि र पूर्ण क्षतिपूर्तिको लागि योग्य हुन्छ, अन्य नोक्सान मात्र इन्फोफर रूपमा कानूनले यति धेरै शब्दहरूमा प्रदान गर्दछ।
यस सिद्धान्तको अर्थ हो कि क्षति निम्त्याउने घटनाको घाइते पार्टीलाई उसको पूर्ण क्षति भन्दा बढी फिर्ता दिईने छैन। डच नागरिक संहिताको धारा:: १०० ले भन्छ कि यदि उही घटनाले पीडितलाई नोक्सान पुर्‍याउँदछ, तर केहि उपज पनि दिन्छ लाभहरू, क्षतिपूर्ति गर्न क्षति निर्धारण गर्दा यो लाभ लिनु पर्छ, इन्फोर्मर जस्तो कि यो उचित छ। एउटा लाभलाई क्षति निम्त्याउने घटनाको परिणाम स्वरूप पीडितको (सम्पत्ति) स्थितिमा सुधारको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ।
यसबाहेक, क्षति जहिले पनि पूर्ण क्षतिपूर्ति हुनेछैन। पीडित आफैलाई सहयोगी व्यवहार गर्ने वा पीडितको जोखिमको क्षेत्रको परिस्थितिले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसपछि सोध्नु पर्ने प्रश्न निम्न छ: पीडितले क्षतिको घटना वा सीमाको सन्दर्भमा उसले गरेको भन्दा फरक व्यवहार गर्नु पर्छ कि? केहि केसहरूमा पीडितले क्षति सीमित गर्न बाध्य हुन सक्छ। यसमा आगलागी हुने दुर्घटना हुने घटना जस्तै आगलागी हुने आगो लगाइएको अवस्था पनि समावेश छ। के त्यहाँ पीडितको कुनै दोष छ? त्यो अवस्थामा, आफ्नै अपराधी व्यवहार सिद्धान्तमा क्षतिको कारण हुने व्यक्तिको क्षतिपूर्ति दायित्वमा कमी आएको हुन्छ र क्षतिको कारण हुने व्यक्ति र पीडित बीचमा विभाजित हुनुपर्दछ। अर्को शब्दहरुमा: क्षतिको एक (ठूलो) हिस्सा पीडितको आफ्नै खर्चमा रहन्छ। जबसम्म पीडित यसको लागि बीमा हुँदैन।
अघिल्लो पोस्ट परिवार पुनर्मिलनको सन्दर्भमा सर्तहरू
अर्को पोस्ट खारेज